ကလေးများအားကစားရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောပျော့ပျောင်းသောကစားကွင်းကလေးများ၊ အိမ်တွင်းကစားရန်ကလေးများအတွက်နူးညံ့သောပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော China Kids indoor indoor playground သည်ကလေးများအတွက်ကစားရန်ထုတ်လုပ်ထားသောထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စက်ရုံ - Kaiqi
ကလေးများကစားရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောအပျော့ထည်ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော indoor indoor ကစားကွင်း
900 * 500 * 280cm
Plastic parts: Bubble film inside, Shrink film outside
Metal parts: Cotton & bubble film inside, Shrink film outside
It isacombined playground including straight slide, bridge, triangle deck, square deck , rotational pipe, functional panels, punch box, rainbow climber, sea balls, trampoline etc. In the 1st floor, there are only trampoline and sea ball, so kids can play free here. There arealot of funny play games in the2nd floor around the structure, kids can go through the aisle by different ways. During the passing through, kids can doalot of play games such as climbing, hiding, riding etc. It will make them feel fully enjoyed their childhood time, meantime during playing, they not only get fun, it will help themalot:
standard GB/T3091-2001, with 0.45 mm PVC foam coated